Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla ichaenderera nekuvandudza rutsigiro rweZFS | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla ichaenderera nekuvandudza rutsigiro rweZFS yakaunzwa muEoan Ermine
Chimwe chezvinhu zvitsva izvo Ubuntu 19.10 Eoan Ermine yakaunzwa kwaive kutsigira ZFS semudzi. Yaive yekutanga uye yekuyedza rutsigiro yakavandudza zvakanyanya, chikamu nekuti yaive yakakwana, mu Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa, asi zvinoita sekunge zvinhu zvichiri nani uye Canonical yatove kushanda. Vagadziri vayo vanozoenderera mberi nekuvandudza Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla, iyo vhezheni ichaburitswa muna Gumiguru gore rino.
Ubuntu 20.10 ichave yekutanga kuburitswa mushure meiyo nyowani LTS vhezheni. Kusvikira iyo inotevera vhezheni yakatsigirwa kwemakore mashanu, matatu mumavhenekeri mazhinji epamutemo, ichave ichiri makore maviri neshanduro nhatu (5, 3, 20.10), asi zvinoita sekunge kuti Canonical inoda kuona kuti ZFS inoshanda zvakakwana mune chingave chakakosha basa reUbuntu 22.04 IAnimal IA tarisiro. Uye ndezvekuti, munguva yakapfuura, kusvika Linus Torvalds yakayambira pamusoro pekushandisa kwayo muLinux.
Ubuntu 20.10 inosvika muna Gumiguru ine ZFS yakavandudzwa
Kunyangwe ivo vaisanganisira rutsigiro ruzere muUbuntu 20.04, iyo ZFS semudzi ichiri kupihwa sechinhu chekuyedza, uye kune vashandisi vanozviti vakarasa dhata nekuda kwekushandiswa kweiyi faira system iyo Torvalds inopa zano pamusoro pekushandisa, zvirinani parizvino. Uye zvinonyadzisa nekuti, kana ikashanda mushe, tinogona kushandisa nzvimbo dzekuongorora tisinga vimbe nevechitatu-bato software kana diski rakaparadzana, pakati pezvimwe zvinhu.
Vagadziri veCanonical vachachengeta ZFS semidzi mukutarisa kwavo kweGroovy Gorilla uye vanoverengeka vavo vatove vachiita hurukuro. Jean Baptiste Lallement, anobva kuCanonical, anovimbisa izvozvo yatanga kuongorora kunyorera ZFS uye yaita misangano yakati wandei pamusoro wenyaya unoti "ZFS uye Enterprise Desktop"
Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla ichave yakajairwa vhezheni vhezheni inotsigirwa kwemwedzi mipfumbamwe iyo kuvhurwa kwayo zviri pamutemo kwakarongerwa Gumiguru 9, 22. Yayo Yemazuva Ekuvaka Ino yave kuwanikwa mune Canonical FTP server.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla ichaenderera nekuvandudza rutsigiro rweZFS yakaunzwa muEoan Ermine
Ford Inoburitsa Yayo Inodzivirira YeMotokari Bvunzo Dhata